Inkabadan 100 Ruux oo ku dhaawacmey Filastiin tan iyo maalintii Shalay. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Inkabadan 100 Ruux oo ku dhaawacmey Filastiin tan iyo maalintii Shalay.
On Dec 11, 2017 189 0
Maalintii shanaad waxaa dhulka Filastiin ee gumeysiga ku jira ka socoda banaanbaxyo iyo iska hor imaadyo u dhexeeya shacabka muslimka ah ee Filastiin oo diidan go’aankii dhawaan kasoo baxay Donald Trump iyo ciidamada maamulka Yahuudda.
Xaafado katirsan magaalada Al-Qudus, deegaannada daanta galbeed iyo Jiidda Qazza ayay banaanbaxyadu weli ka socodaan, kuwaan oo loogu magac daray kacdoonkii carada, waxaana ciidamada Yahuudu adeegsanayaan meelaha qaar rasaas nool nool.
Sida ay xaqiijisay Bisha Cas Filastiin, tan iyo maalintii shalay oo Axad ahayd waxaa dhaawacmey 157 Ruux, kuwaas oo la dhigay xarumaha caafimaadka, waxaana tobanaan kamid ah dadkan ay ku dhaawacmeen rasaas nool nool oo uga timid dhanka ciidamada Yahuudda.
Dadka muslimiinta Filastiiniyiinta ayaa ku celcelinaya halkudhigyo ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedeen go’aankii dhawaan uu qaatay Donald Trump, kaas oo magaalada Al-Qudus ugu aqoonsaday caasimadda maamulka Yahuudda.